တတ်ယောင်ကား ဘွဲ့ရ ပညာမတတ် – Min Thayt
တတ်ယောင်ကား ဘွဲ့ရ ပညာမတတ်
Min Thayt August 22, 2019 August 22, 2019
တော်ဖလာ ပြောခဲ့ဖူးသော မှတ်ချက်တစ်ခုရှိသည်။ “ကမ္ဘာကြီးကို ပြောင်းလဲတာ၊ အရင်းရှင်လည်း မဟုတ်ဘူး။ ကွန်မြူနစ်လည်း မဟုတ်ဘူး၊ ကမ္ဘာကြီးကို ပြောင်းတာ ပညာတတ်တွေပဲ…” ဟု ပြောခဲ့ဖူးသည်။ တော်ဖလာ သည် အမေရိကန်ဂျာနယ်လစ်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။ လူမှုဗေဒပညာရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သူရေး သားခဲ့သော ‘အနာဂတ်သွေးလန့်မှု’ စာအုပ်သည် နာမည်ကျော်သည်။ အိုင်ဒီယော်လိုဂျီတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေသော စစ်အေးကာလတွင်၊ ထိုစကားကို ပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ လူ့သမိုင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဖြစ်စဉ်သမိုင်းကို လေ့ လာကြည့်လျှင် ကမ္ဘာကြီးကို အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲသူများမှာ ၊ ပညာတတ်များသာဖြစ်ကြောင်း တွေ့နိုင် သည်။ တွေးခေါ်ရှင် ဒဿနသမားများကို လေ့လာကြည့်ပါ။ ဂရိ / ရောမခေတ်ဟု ပြောလျှင် ဆိုကရေးတီး၊ ပလေတိုး၊ အရစ္စတိုတယ်တို့ကို သိကြသည်။ ရီနေးဆန့်ခေတ်ကို ကြည့်လျှင် ၊ ရူးဆိုးတို့ ဂျွန်လော့ခ် တို့ကို သိ ကြသည်။ အတွေးအခေါ်ရှင်များသည် ပညာကို ခုန်မင်သည်။ ဆင်ခြင်စဉ်းစားခြင်းကို ပြုမူကြသည်။ ပညာနှင့် ဆင်ခြင်ခြင်း၊ စဉ်းစားခြင်းသည် တွဲနေသည်။ ပညာသည် ဒဿနနှင့်တွဲနေသည်။
ကမ္ဘာကြီးကို ပြောင်းလဲစေခဲ့သူများ၌ ဒဿနသမားများက ထိပ်ဆုံးက ပါဝင်သည်။ ဒဿနသမားများ၊ တနည်း အားဖြင့် ပညာတတ် ဒဿနသမားများ။
ထို့နောက် စွန့်စားသွားလာသူများနှင့် တီထွင်ဖန်တီးသူများ။ ရေနွေး ငွေ့ အင်ဂျင်ကို တီထွင်သူ၊ တယ်လီဖုန်းကို တီထွင်သူ၊ ပုံနှိပ်စက်ကို တီထွင်သူ၊ လျှပ်စစ်ကို တီထွင်သူ၊ မော်တော်ကားကို တီထွင်သူ…. စသည်ဖြင့် တီထွင်သူများ အမြောက်အမြားကို ကြည့်ပါ။ သူတို့သည် တက္ကသိုလ်ပညာ ပြီးဆုံးချင်မှ ပြီးဆုံးပါလိမ့်မည်။ မပြီးဆုံးကြတာများပါသည်။ သို့သော် သူတို့သည် လေ့လာမှု၊ စူးစမ်းမှု၊ ဆည်းပူးမှုများကို ခုန်မင်သည်။ ပညာသည် လေ့လာမှု၊ စူးစမ်းမှု၊ ဆည်းပူးမှုများနှင့်တွဲနေသည်။ ထိုသူများ တီထွင်ဖန်တီးခြင်းကြောင့် ကမ္ဘာကြီး ပြောင်းလဲလာသည်။ ကမ္ဘာကြီးကို ပြောင်းလဲခဲ့သူများ၌၊ လေ့လာသူ စူးစမ်းသူ၊ ဆည်းပူးသူများသည်ဖြစ်သည်။ လေ့လာဆည်းပူးခြင်းကို တီထွင်ကြံဆခြင်းနှင့် ပေါင်းစည်းနိုင်သူများ ဖြစ်သည်။
စွန့်စားသွားလာသူများသည်လည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းဖြစ်သည်။ စွန့်စားသွားလာသူသည်၊ ဉာဏ်ကို သုံးရ သည်။ သူသည် သူ့ခရီးအတွက်၊ သူ့လုပ်ရပ်အတွက် ကြိုတင်လေ့လာဆည်းပူးမှုများကို လုပ်ရသည်။ စွန့်စား သူ၊ စွန့်စားသွားလာသူများသည် မျက်စိမှိတ်၍ အသက်စွန့် စွန့်စားကြသည် မဟုတ်။ ကြိုတင်လေ့လာသိရှိထား မှုကို အရင်းခံပြီး စွန့်စားလုပ်ဆောင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာ – ကိုလံဘတ်ကို ကြည့်ပါ။ ကိုလံဘတ်သည် ကမ္ဘာကြီးလုံးကြောင်း လက်တွေ့သက်သေပြချင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာကြီးသည် လုံးသည် ဖြစ်ရိုးမှန်လျှင်၊ အရှေ့စူးစူးကို ရွက်လွှင့်ပါက၊ နောက်ဆုံး ဤနေရာသို့ပင် ပြန်ရောက်မည်ဟု ယူဆခဲ့သည်။ ထိုယူဆချက်၏ ကနဦး အမြင်မှာ ဂယ်လီလီယိုတို့ထံမှ လာတယ်။ အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းကို တီထွင်ပြီး၊ နက္ခတာရာဗေဒကို လေ့လာပြီး အစဉ်အလာ ယုံကြည်လက်ခံထားသော ကမ္ဘာကြီးပြားကြောင်းကို ငြင်းပယ်လိုက်သည့် အယူအဆ မှ စတင်ခဲ့သည်ဟု ပြော၍ ရနိုင်မည်။ ပညာသမားက တီထွင်ဖော်ထုတ်လိုက်သော အယူအဆကို ဆည်းပူး လေ့လာမှုရှိသော စွန့်စားသူက ထပ်ပေါင်းလိုက်သောအခါ၊ ကမ္ဘာ့မြေကြော ရေကြောသည် ရွာကြီးတစ်ရွာလို ကျုံ့ဝင်သွားသော အဖြစ်ကိုရောက်လာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာကြီးကို ပြောင်းသူမှာ ပညာတတ်များသာ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုလျှင် မမှား။
• အတွေးအခေါ် ပြောင်းလဲခြင်းနောက်တွင် ပညာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လိုက်သည်။
• ပညာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနောက်တွင် စက်မှုတော်လှန်ရေး လိုက်သည်။
• စက်မှုတော်လှန်ရေးနောက်တွင် လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လိုက်သည်။
• လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနောက်တွင် နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လိုက်သည်။
• နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနောက်တွင် လူ့အဖွဲ့အစည်းတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှု လိုက်သည်။
• လူ့အဖွဲ့အစည်းတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုနောက်တွင် လူသားမျိုးဇာတ်ကြီးတစ်ခုလုံး တိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်း လိုက်လာကြသည်။
အတွေးအခေါ်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အမြင်ပြောင်းလဲခြင်းသည် ချိတ်ဆက်နေသည်။ အတွေးအခေါ် ပြောင်းလဲခြင်း နှင့် ပညာရေးပြောင်းလဲခြင်းသည် ချိတ်ဆက်နေသည်။ ပညာရေးနှင့် စက်မှုနည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် ချိတ်ဆက်နေသည်။ နည်းပညာတိုးတက်မှုနှင့် စီးပွားရေး တိုးတက်မှုက ချိတ်ဆက်နေသည်။ စီးပွားရေး တိုးတက်ခြင်းသည်၊ လူမှုအလွှာတို့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းကို ကျေးဇူးပြု ထောက်ပံ့သည်။ လူမှုအလွှာတစ်ခုချင်းစီ က ပညာကောင်းကောင်းသင်လာနိုင်၊ အသက်ရှည်ရှည်ကျန်းကျန်းမာမာနေလာနိုင်၊ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် စားသောက်နေထိုင်ရပ်တည်လာနိုင်သောအခါ လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ အရည်အသွေးဖြစ်သော ဆင်ခြင်တုံတရား၊ အမြော်အမြင်၊ လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ အသိဉာဏ်အဆင့်အတန်းနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ တန်ဖိုး၊ ရင့်ကျက်မှုညွှန်း ကိန်းများ မြင့်လာသည်။ ဤသို့ဖြင့် လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ အဆင့်အတန်းလည်း တဖြည်းဖြည်း အဆင့်မြင့်လာ သည်။
အဆင့်အတန်းမြင့်သော လူ့အဖွဲ့အစည်းသည် လူကြီးလူကောင်းဆန်လာသည်။ ကိုယ်ချင်းစာတရား ပိုမိုကိန်း အောင်းလာသည်။ ပို၍ လွတ်လပ်လာသည်။ ဘဝအဓိပ္ပာယ်ကို ပိုမိုဖန်တီးလာနိုင်သည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်း အတွင်းမှာ တရားမျှတသော အခင်းအကျင်းဖြစ်လာသည်။ ဖိနှိပ်မှု၊ ရက်စက်မှု၊ ညင်းဆဲမှုများ နည်းပါးလား သည်။ ဤသို့ တရားမမျှတမှုများ၊ ဖိနှိပ်မှုများ၊ ရက်စက်မှုများ၊ ညင်းဆဲမှုများကို အုပ်ချုပ်သူ အစိုးရက ကျင့်သုံး လာလျှင်လည်း အဆင့်အတန်းမြင့်မားလာသော လူ့အဖွဲ့အစည်းက လက်မခံ။ တွန်းလှန်တတ်သည်။ ထို့ကြောင့် လူလတ်တန်းစားဖွံ့ဖြိုးသော၊ စက်မှုဖွံ့ဖြိုးသော၊ စားနိုင်သောက်နိုင်ပြီး ပညာတတ်သော လူအဖွဲ့ အစည်း၌၊ အာဏာရှင်ကို တော်လှန်သော နိုင်ငံရေးအပြုအမူများ ပေါ်လာရခြင်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးသည် အဆင့်မြင့်သော လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် ကိုက်ညီအောင် ကျင့်ကြံနေထိုင်လာရသည်။ ဤသို့ဖြစ်အောင်လည်း ပညာတတ်သော လူ့အဖွဲ့အစည်းက နိုင်ငံရေးကို တောင်းဆိုသည်။
• ပို၍ လွတ်လပ်သော ….
• ပို၍ တိုးတက်သော …
• ပို၍ ဆင်ခြင်တုံတရား မြင့်မားသော ….
• ပို၍ တရားမျှတသော ….
• ပို၍ အဓိပ္ပာယ်ရှိသော ….
• ပို၍ ငြိမ်းချမ်းသော လူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်အောင် အဓိက တွန်းအားပေး မောင်းနှင်သောယူနစ်မှာ၊ ပညာတတ်ယူနစ်ဖြစ်သည်။ ပညာတတ်များကသာ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်သည်။
အာဏာရနိုင်ငံရေးသမားက အဓိကရုဏ်းကိုလည်း ဖန်တီးနိုင်သည်။ စစ်ကိုလည်း ပြုနိုင်သည်။ လက်နက်အား ကိုးသူက လက်နက်ကို အားကိုးပြု၍ လူ့အဖွဲှ့အစည်းကို ပြောင်းလဲလိုသည်။ အာဏာရှိသူက အာဏာကို သုံး၍ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ပြောင်းလဲလိုသည်။ အာဏာရှိသည်ဖြစ်စေ၊ လက်နက်ရှိသည်ဖြစ်စေ… အဆိုပါ အာဏာနှင့် လက်နက်၌ ပညာနှင့် မတွဲနိုင်လျှင် ၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းသည် ပျက်စီးသည်။ ပျက်ယွင်းသည်။ ယိုယွင်းလာသည်။ ချိနဲ့လာသည်။ ပညာသည် အရာရာကို ဖန်တီးစီရင်နိုင်သည်။
အာဏာရှိသူ၊ လက်နက်ကိုင်ထားသူ၌ ပညာနှင့်ယှဉ်သော အသိမရှိပါက၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးပိုပေးနိုင်သည်။ ဤသို့သော သာဓကများ အတိတ်မှာ မြောက်မြားစွာ ဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီးပြီ။
လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ပညာရှေ့သွားရှိသော၊ ဆင်ခြင်တုံတရား ဦးဆောင်သောသူများက ခေါင်းဆောင်နေရာ ရကြလျှင်၊ လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ အရည်အသွေးသည် မြင့်လာသည်။ တက်လာသည်။ ရင့်ကျက်မှုကွင်းစက်များ စာအုပ်ကို ရေးသားသူ ဟယ်ရီ အိုဗာစထရိက ၊ “လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ အန္တရာယ်အရှိဆုံးသူတွေကတော့၊ သူငယ်နာမစင်တဲ့ လူကြီးတွေပဲ….” ဟု ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောခဲ့ဖူးသည်။
သူငယ်နာမစင်ခြင်းသည် မရင့်ကျက်ခြင်းဖြစ်သည်။ မရင့်ကျက်ခြင်းသည် ပညာမရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ပညာမရှိခြင်း သည် အလေ့အလာ၊ အစူးအစမ်း ခေါင်းပါးခြင်းဖြစ်သည်။ လေ့လာစူးစမ်းမှုခေါင်းပါးခြင်းသည် တစ်ဖက်ပိတ်၊ တရားသေသမားများကို မွေးထုတ်ပေးသည်။ ရှေးရိုးစွဲသော၊ အတ္တကြီးသော၊ ဆင်ခြင်တုံတရားနိမ့်ပါးသော လူ့ အဖွဲ့အစည်းသည် ပိုကောင်းမလာ။ ပို၍သာ ဆိုးသွားနိုင်သည်။
ပညာရေးသည် ဆင်ခြင်တုံတရားအပေါ် အခြေမပြုဘဲ၊ ဘွဲ့လက်မှတ်အပေါ်မှာသာ အခြေပြုထားသော လူများ များပြားလာခြင်းသည် လူ့အဖွဲ့အစည်း ပျက်သုဉ်းကိန်းကို စတင်နေသော အခြင်းအရာဖြစ်သည်။ ပညာတတ် များသည် လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ မောင်းနှင်အားဖြစ်သည်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို အောင်မြင်အောင် လုပ်ဆောင် နိုင်သူများမှာ ပညာတတ်များသာဖြစ်သည်။ ပြောင်းလဲခြင်းသည် တိုးတက်ခြင်းဖြစ်သည်။ တိုးတက်ခြင်းသည် လည်း ပြောင်းလဲခြင်းနောက်မှာ လိုက်လာသည်။ ပြောင်းလဲခြင်း၌ တိုးတက်ခြင်း ပါမလာ၊ ဆုတ်ယုတ်ခြင်းသာ ဖြစ်လာပါက လူ့အဖွဲ့အစည်းသည် မွဲသထက် မွဲရုံသာ ရှိသည်။
မြန်မာပြည်၌ ပညာတတ်ပြဿနာရှိသည်။ မြန်မာပြည်၏ ပညာတတ်ပြဿနာကို ဆန်းစစ်ရန်လိုသည်။ ကျနော့် ယူဆချက်အရ၊ မြန်မာပြည်၏ ပညာတတ် ပြဿနာကို နှိုက်ထုတ်ဆန်းစစ်ကြည့်ချင်သည်။
• မြန်မာပြည်၌ တကယ့်ပညာတတ်နည်းပါးသည်။
• မြန်မာပြည်၌ ဘွဲ့ရပညာမတတ်များ များပြားသည်။
• မြန်မာပြည်၌ တတ်ယောင်ကားများ များပြားသည်။
• မြန်မာပြည်၌ တကယ်သိသူ၊ တတ်သူ ခေါင်းပါးသည်။
• မြန်မာပြည်၌ ပညာရေးသည် လူမှုရေးဖြစ်နေသည်။
• မြန်မာပြည်၌ လူတော်ကြောက်ရောဂါ ရှိသည်။
• မြန်မာပြည်၌ တော်သူ၊ တတ်သူကို ချောင်ထိုးထားလေ့ရှိသည်။
• မြန်မာပြည်၌ ဘွဲ့ကိုသာ ပညာထင်သည်။
• မြန်မာပြည်၌ ဆင်ခြင်တုံတရားကို ပညာဟု မထင် ။
• မြန်မာပြည်၌ အာဂုံရမှ အာဂလူဖြစ်သည်။
• မြန်မာပြည်၌ မစူးစမ်း၊ မလေ့လာ၊ မဆင်ခြင်ဘဲ ဖာသိဖာသာနေသူများ များသည်။
• မြန်မာပြည်၌ ကြားဖူးနားဝနှင့် နားစွန်နားဖျားဖြင့် ရမ်းတုပ်ကြသည်။
မြန်မာပြည်တွင် မသိသူထက် မတတ်သူများသည်။ မတတ်သူထက်၊ သိသလိုလို တတ်သလိုလို တတ်ယောင ကားများ ပိုများသည်။ မကျက် တစ်ကျက်ပေါင်မုန့်များဖြစ်သည်။ Half Educated များဖြစ်သည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်း၌ ဖြစ်သော ပြဿနာများကို ဆန်းစစ်ကြည့်လျှင်၊ လုံးဝ မသိမတတ်သူများကြောင့်ဖြစ်သည် မဟုတ်။ လောက်လောက်လားလား တတ်သိထားသူများကြောင့်လည်း မဟုတ်။ မြန်မာပြည်၏ ပြဿနာများ သည် သိသလိုလို တတ်သလိုလို တတ်ယောင်ကားများကြောင့် ပိုအဖြစ်များသည်ကို တွေ့ရသည်။
လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ပြောင်းလဲသူများမှာ၊ ပညာတတ်များဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာကြီးကို ပြောင်းလဲသူများမှာ ပညာ တတ်များဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုပညာတတ်များမှာ တတ်ယောင်ကားများ မဟုတ်။ ဘွဲ့ရပညာမတတ်များလည်း မဟုတ်။ လောက်လောက်လားလား တတ်သိရန် ခြေခြေမြစ်မြစ် လေ့လာနေသူ၊ တစိုက်မတ်မတ် စူးစမ်းနေသူ၊ ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် ဆည်းပူးနေသူ၊ သိသလောက် တတ်သလောက် လက်တွေ့လုပ်ကိုင်နေသူများသာ ဖြစ်ကြောင်း၊ တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့လည်း ပိုသိ ပိုတတ်အောင် အစဉ်တစိုက်လုပ်ဆောင်နေသူများဖြစ်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ပါသည်။
ညနေ ၄း၂၁
၇ ၊ ဩဂုတ် ၊ ၂၀၁၉ ။
Tagged Education, Myanmar Education, Myanmar Society, Uneducated
Previous post ယောင်ဝါး လူ့အဖွဲ့အစည်း
Next post မြန်မာစာပေဖြတ်သန်းမှု